အရက် နဲ့ ဆေးလိပ်က သွေးတိုးစေသလား - Hello Sayarwon
အရက် နဲ့ ဆေးလိပ်က သွေးတိုးစေသလား
သွေးတိုးခြင်းကို အမြဲတမ်းတော့ မကာကွယ်နိုင်ပေမယ့် ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ အရက်ကို အသင့်အတင့်သာ သောက်သုံးခြင်းဟာ သွေးပေါင် ကျဆင်းစေပါတယ်။
ဆေးလိပ်နဲ့ အရက်သောက်တဲ့သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ နှလုံးသွေးကြော ကျန်းမာရေးကို စိတ်ပူသင့်ပါတယ်။ ဒီအကျင့်နှစ်ခုလုံးဟာ သွေးတိုးခြင်း စေပြီးတော့ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။
ဆေးလိပ်နဲ့ အရက်က သွေးတိုးစေခြင်းကို လူသိများပါတယ်။ နှစ်ခုလုံးဟာ သွေးဖိအားနဲ့ နှလုံးသွေးကြောတွေပေါ်မှာ ကြီးမားတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်မှာ သွေးတိုးရှိနေရင် (သို့) သွေးတိုးရှိစေတဲ့ အချက်တွေ ရှိနေမယ်ဆိုရင် သင်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ အချက်တွေကို ထိန်းချုပ်သင့်ပါတယ်။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာ သွေးဖိအားကို ဘာဖြစ်စေပါသလဲ။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းဟာ သွေးဖိအားကို ရုတ်တရက် တက်လာစေပြီးတော့ အပေါ်သွေးပေါင်ကို ၄ mmHG တက်စေပါတယ်။ ဆေးလိပ်မှာပါတဲ့ နီကိုတင်းဟာ အာရုံကြောစနစ်ကို ဓါတုပစ္စည်းတွေ ထုတ်လွှတ်စေပါတယ်။ ဒီဓါတုပစ္စည်းတွေဟာ သွေးကြောကျဉ်းခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး သွေးပေါင်တက်စေပါတယ်။
ဆေးလိပ်ဟာ သွေးကြောတွေကို အချိန်ကြာမြင့်စွာ ထိခိုက်စေပြီးတော့ သွေးပေါင်တက်ခြင်းအပြင် လေဖြတ်ခြင်း၊ နှလုံးရောဂါနဲ့ နှလုံးရပ်ခြင်းတို့ ကိုလည်း ပိုမို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ သွေးတိုးနဲ့ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း ပေါင်းစပ်ခြင်းဟာ သင့်ကို သွေးတိုးရှိတဲ့ ဆေးလိပ်မသောက်သူတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် နှလုံးရပ်ခြင်း၊ လေဖြတ်ခြင်းနဲ့ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းခြင်းတွေ ပိုမိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အရက်ဟာ သွေးဖိအားကို ဘာဖြစ်စေပါသလဲ။
သွေးပေါင်ကို ပုံမှန်ဖြစ်စေပြီး ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကို ကာကွယ်ပေးဖို့ အရက်ကို အနေတော်သောက်သုံးခြင်းကသာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ အမျိုးသမီးတွေမှာ တစ်နေ့ကို တစ်ခွက်ထက်ပိုပြီး မသောက်သင့်ပဲ အမျိုးသားတွေမှာ တစ်နေ့ကို နှစ်ခွက်ထက်ပိုပြီး မသောက်သင့်ဘူးလို့ ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အရက်ကို လျှော့လိုက်ရင် သွေးပေါင်ကို ၃ mmHg ကျစေနိုင်တယ်လို့ သုတေသန တွေက ပြောပါတယ်။
ဆေးလိပ် (သို့) အရက်ကို ဘယ်လိုဖြတ်ရမလဲ။
အောက်ဖေါ်ပြပါ အချက်တွေကတော့ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကို ရပ်တန့်ဖို့နဲ့ အရက်ပမာဏကို ကန့်သတ်ဖို့အတွက် အကြံဉာဏ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
• ရပ်ဖို့ကို ကတိပြုပါ။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ သင့်ကိုယ်သင် (သို့) လိုအပ်ရင် သက်သေတစ်ယောက်ပါ ခေါ်ယူပြီး နေ့ရက်သတ်မှတ်ပြီး စာချုပ်မှာ လက်မှတ်ထိုးပါ။ ဆေးလိပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေ ဖြစ်တဲ့ ဆေးလိပ်၊ မီးခြစ်၊ ပြာခွက် အစရှိတာတွေကို အကုန်လွှတ်ပစ်ပါ။ သင့်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး နီကိုတင်းကပ်ခွာ (သို့) ပီကေ ကို အသုံးပြုပါ။
• ပြန်စသောက်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ အစာစားပြီး တီဗွီကြည့်နေချိန် (သို့) ဖုန်းပြောနေတုံးမှာ အရမ်းဆေးလိပ်သောက်ချင်လာတာကို သတိထားမိပါသလား။ ဒါဆို သင့်ကိုယ်သင် အလုပ်တွေ ရှုပ်အောင် လုပ်နေပြီး ပြန်စသောက်ခြင်းကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။ အစာစားပြီးရင် တီဗွီကြည့်မယ့်အစား လမ်းလျှောက်ပါ။ ဘားကိုသွားမယ့်အစား ကော်ဖီဆိုင်မှာ ကော်ဖီသွားသောက်တာမျိုး ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
• သင့်အချိန်တွေကို အပြည့်အဝ အသုံးချပါ။ ဆေးလိပ်နဲ့ အရက်မှာ စိတ်မရှိတော့အောင်လို့ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ပါ၊ ဈေးဝယ်ထွက်ပါ၊ လျှောက်လည်ပါ၊ ပြီးတော့ သင့်အချိန်တွေကို အကျိုးရှိအောင်သုံးပြီး သင့်ကို ပျော်ရွှင်ကျေနပ်မှုတွေ ပေးမယ့် ဝါသနာအသစ်တစ်ခုကို စတင်လိုက်စားပါ။
• အရက်ကို အနည်းငယ်သာ သောက်သုံးပါ။ ဆိုဖာပေါ်မှာ ကြွက်သားကြော်အပြည့်နဲ့ ဝိုင်တစ်ခွက်ကို ထိုင်သောက်နေမယ့်အစား တစ်နေ့ကို အရက်တစ်ခွက် (အမျိုးသားဆိုရင် နှစ်ခွက်) သာ သောက်သုံးပါ။ အရက်တစ်ခွက်မှာ ပါတဲ့ ပမာဏတွေကို သိရှိပါစေ။ ဝိုင်ခွက်တစ်ခွက်ဟာ ၅ အောင်စပါပြီး ဘီယာတစ်ခွက်ကတော့ ၁၂ အောင်စပါပါတယ်။ အရက်တစ်ခွက်ကတော့ ၁.၅ အောင်စ ရှိပါတယ်။
• စွဲနေတဲ့ လက္ခဏာတွေကို သတိပြုမိပါစေ။ အရက်ကို အတိုင်းအထွာနဲ့ သောက်ဖို့ ခက်ခဲနေတယ်ဆိုရင် ပြင်ပ အကူအညီကိုယူပါ။ သင့်ရဲ့ အလုပ်၊ ကျောင်း၊ ဆက်ဆံမှုတွေကို အရက်က ထိခိုက်လာပြီဆိုရင်တော့ ပညာရှင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကူအညီယူဖို့ အချိန်ကျပါပြီ။ အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ကူညီတဲ့ အုပ်စုတွေက အကျိုးရှိပါတယ်။ တကယ်လို့သင်ဟာ အရက်အလွန်အကျွံသောက်သူဆိုရင် ဆေးလိပ်ဖြတ်တဲ့ အစီအစဉ် နဲ့ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းတွေဟာ သင့်အတွက် လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
သွေးပေါင်တက်ခြင်းကို အချိန်တိုင်းတော့ ကာကွယ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သွေးပေါင်တက်ခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ ဆေးလိပ်နဲ့ အရက်တွေကိုတော့ ထိန်းချုပ်နိုင်မှာပါ။
Stewart SH, et al. Blood pressure reduction during treatment for alcohol dependence:
Results from the COMBINE study. Addiction. 2008;103:1622.
Halanych JH, et al. Alcohol consumption in young adults and incidenthypertension: 20-year follow-up from the Coronary Artery Risk Development in Young Adults study. American Journal of
Overview of alcohol consumption. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism.
Alcohol and cardiovascular disease. American Heart Association.
Dietary Guidelines for Americans 2010. U.S. Department of Agriculture.
http://www.health.gov/dietaryguidelines/dga2010/dietaryguidelines2010.pdf.Stewart SH, et al.
လူလတ်ပိုင်းအရွယ်တွင် အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းကြောင့် လေဖြတ်နိုင်ခြေကို မြင့်စေခြင်း
နို့တိုက်မိခင် အရက်သောက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ဆိုးကျိုးများ